आइफोन ११ लञ्च, ट्रिपल क्यामेरामा खास के छ ? मुल्य कति
काठमाडौं । विश्वले आर्थिक मन्दीकोे मार खेपिरहेका बेला एप्पल कम्पनीले आइफोन ११ सिरिजको आइफोन र आइप्याडका साथै नयाँ स्मार्टवाच लञ्च गरेको छ । नयाँ आइफोन ११, आइफोन ११ प्रो र आइफोन..
फेसबुकले डेटिङ जानेको लागि साथी खोजी दिने एप ल्यायो
Posted on Sep 08 2019
एजेन्सी । फेसबुकले ‘डेटिङ’ एप ल्याएको छ। एक वर्षसम्म कोलम्बियामा परीक्षण गरिएको फेसबुक डेटिङ अब अमेरिका लगायत २० देशमा उपलब्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। ब्राजिल, क्यानडा, चिली, कोलम्बिया, सिंगापुर, इक्वेडर,..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले डाटा रोमिङ सेवा शुरु गरेको छ। पोस्टपेड ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी ८७ मुलुकका १ सय ९२ भन्दा बढी मुलुकमा भ्वाइस अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेको कम्पनीले अवदेखि..
काठमाडौं । राजधानीमा हालै सम्पन्न नाडा अटो शोमा प्रदर्शनीमा राखिएको सबैभन्दा महँगो मोटरसाइकल बिक्री भएपछि सबैको मनमा प्रश्न उठ्यो, ‘आखिर यो बाइक किन्यो कसले ?’ किनकी कम्पनीले बिक्री भएको सूचना त..
६ रुपैयाँमा नेपाल टेलिकमको मिस्ड कल अलर्ट सेवा कसरी लिने ?
काठमाडौं । तपाई मोबाइल नेटवर्क नभएको स्थानमा जाँदै हुनुहुन्छ ? ब्याट्री सकिएर वा अन्य कारणले मोबाइल फोन स्विच अफ भएको अवस्था छ कि रु तपाईंको फोन व्यस्त हुँदा अरुले फोन..
एजेन्सी । विशाल चिनियाँ प्रविधि कम्पनी ह्वावेईले अमेरिका सरकारले आफ्नो व्यापार बिगार्न सबै उपाय अपनाएको आरोप लगाएको छ। अमेरिकाले आफ्नो सञ्जालमा हस्तक्षेप गर्न साइबर आक्रमण गरेको र आफ्ना कर्मचारीलाई धम्काएको आरोप..
सरकारले नेपाल टेलिकमको शेयर फेरि सर्वसाधारणको लागि बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६६ प्रतिशत शेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको..
ट्वीटर मालिककै एकाउन्ट ह्याक, 'हिटलर निर्दोष थिए' भन्ने स्टाटस आयो
Posted on Aug 31 2019
वासिङ्टन । ट्वीटरका मालिक ज्याक डोर्सेको ट्वीटर एकाउन्टबाटै जातीय द्वेष फैलाउने किसिमका ट्वीट भएका छन् । शुक्रबार दिउसो उनको ट्वीटर एकाउन्ट ‘ह्याक’ भएको बताइएको छ । जसबाट सामाजिक हिंसा भड्काउनसक्ने स्टाटस..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले निकै सहुलियत दरमा ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । दैनिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी कम्पनीले ‘प्रतिदिन १ जीबी डाटा’ प्याकेज योजना अन्तर्गत सस्तो दरमा इन्टरनेट..
कर कार्यालयले एनसेलमाथि लगाएको ६२ अर्व कर सर्वोच्चबाट बदर, एनसेललाई कति फाईदा भयो ?
काठमाडौँ । टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले सोमबार फैसला गर्दै वैशाख ३ गते ठूला करदाताले निर्णय गरेअनुसार कर तिर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको छ। ठूला करदाताको..
एनसेलले मोवाईल इन्टरनेटको मूल्य घटायो, अब कति पर्छ ?
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलले मोबाइल डाटाको मूल्य घटाएको छ । सार्वजनिक सूचना निकाल्दै एनसेलले बुधबारदेखि मोबाइल डाटाको मूल्य घटाएको जानकारी गराएको हो। एनसेलका अनुसार अब एक एमबी डाटाको..
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको नाफा ४८.६१ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँले नाफामा गिरावट आएको हो। टेलिकम सेवामा भन्दा सम्पत्ती थुपार्नमा ध्यान दिँदा नेपाल टेलिकमको नाफामा..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले रोमिङ शुल्कमा भारी छुट दिएको छ । टेलिकमले विश्वभरका ८७ वटा मुलुकका १ सय ९२ दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीसँग सहकार्य गरी ती देशमा जाँदा रोमिङ सेवा प्रयोग..
पहिलो पटक हुवावेको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग भएको डिभाइस सार्वजनिक
एजेन्सी । चिनियाँ टेक जायन्ट हुवावेले विकास गरेको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग भएको पहिलो डिभाइस सार्वजनिक भएको छ। हुवावे डेभलपर सम्मेलनमा कम्पनीले उक्त डिभाइस सार्वजनिक गरेको हो। हुवावेकै मातहतकै अनरले स्मार्ट स्क्रिन..
बालुवाटारमा रहेको सुबिसु कार्यालयमा आगलागी
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित सुबिसु कार्यलयमा आगलागी भएको छ । सो कार्यलयको इन्धन भण्डारण भएको ठाँउबाट आगो सल्किएको बुझिएको छ । आगो नियन्त्रण हुने क्रममा छ । इन्टरनेट र केवल टेलिभिजन प्रदायक..
कुन मुलुकसँग कति सुपरकम्प्युटर, कसरी गर्छ काम ?
काठमाडौं । सुपर कम्प्युटर भन्नेबित्तिकै विशेष काम गर्ने शक्तिशाली कम्प्युटर भन्ने हामी बुझ्छौं । आधुनिक विश्वको विकासका लागि सुपरकम्प्युटर निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले अहिले धेरै मुलुक यसको विकास तथा..
नेपाल टेलिकमको सीयुजी अफर, निःशुल्क असीमित कुरा गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले न्यूनतम प्याकेज रकमबाट महिनाभरी मोबाइलमा असीमित कुराकानी गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । संस्थागत प्रयोगकर्ता समूह (सीयुजी) योजनामा समाहित भएर ग्राहकहरुले यो सेवा उपभोग गर्न..
चार्जमा राखेको मोबाइल चलाउँदा करेन्ट लागेर १५ वर्षीय किशोरको मृत्यु
विराटनगर । चार्जमा राखेको मोबाइलमा गेम खेल्दा करेन्ट लागेर मोरङको लेटाङमा एक किशोरको मृत्यु भएको छ। बिहीबार राति बिहान लेटाङ नगरपालिका ३ का १५ वर्षीय सौजन राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको..
अबदेखि कुन सवारी साधनको कति मूल्य पर्छ (सूचि)
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियन अफ नेपालले सवारी तथा ढुवानी साधनको अधिकतम मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । सवारी साधनको अधिकतम मूल्य हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । केही बिक्रेताले आफै नै..
उर्जा मन्त्रालय लगायत केही सरकारी निकायका साइट फेमली एट्याक साइबरले गर्यो ह्याक
काठमाडौं। ह्याकरहरुको समूहको आक्रमणमा नेपाल सरकार सम्बन्धित केही निकायका साइटहरु ह्याक भएका छन्। फेमली एट्याक साइबरले नेपालका केही सरकारी निकायका साइटहरु ह्याक गरेको हो। सो समूहले फेसबुक पेजमार्फत साइट ह्याक गरेको..
अव हरेक टिभीमा यूट्युब भिडियो हेर्न मिल्ने, वर्ल्डलिंकले ल्यायो यस्तो प्रोडक्ट
काठमाडौं । इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंककम्युनिकेशनले हरेक टिभीमा यूट्युव हेर्न मिल्ने नया प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । हरेक ब्याक्तिले मोवाइल, ल्यापटप वा स्मार्ट टिभीमा यूट्युव हेर्दै आइरहेको भएतापनी..
सरकारले सहुलियत दिएपछि इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भयो
काठमाडौं । सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले तिर्ने शुल्क छुट दिने सरकारले जेठमा निर्णय गरे पनि दूरसञ्चार नियमावली..
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष छनोट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिस भएका व्यक्तिमा हाल प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, डा नन्दविक्रम अधिकारी र दीपकराज जोशी..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको टेलिफोन जडान सस्तो भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नेपाल टेलिकमको स्थानीय टेलिफोन जडान र पोष्टपेड मोबाइल सस्तो भएको हो । आर्थिक विधेयक, २०७६ को..
सरकारबाट ३ सय बिजुली बस किन्न साझाले पायो ३ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारबाछ ३ सय बिजुली बस ल्याउनका लागि साझा यातायातले ३ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ। सार्वजनिक यातायातमा बिजुली बसलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ३ सय बिजुली बस संचालन गर्ने लक्ष्यअनुरुप सरकारले..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट सेवाको महशुल नबढाउने भएको छ । सरकारले हालै मात्र इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस आधारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले..
काठमाडौं । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएशन अफ नेपाल (आईस्पान) ले आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ देखि सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क (टीएसी) उपभोक्तामार्फत उठाउने भएको छ । यो निर्णयसँगै आगामी..
एनटिसीको मोबाइल बोक्नेका लागि बम्पर अफर, यस्ता छन् छुट योजना
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी पोष्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ता र संस्थागत ग्राहकलाई भारी छुट योजना ल्याएको छ । यसैगरी कम्पनीले एफटिटिएच सेवामा पनि यस्तै छुटको योजना आगामी साउन ५..
टेलिकमले ल्यायो निशुल्क सेवा
काठमाडौँ । देशका विभिन्न स्थानमा बाढीरपहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल टेलिकमले सम्भावित विपद्सम्बन्धी पूर्वजानकारी सम्प्रेषित गर्नका लागि विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । टेलिकमले जल तथा मौसम विज्ञान..
फेसबुक, गुगललाई फ्रान्सले लगायो कर, अन्य मुलुकले पनि लगाउनु पर्छ
फ्रान्सको तल्लो सदनले गुगल, फेसबुक तथा अमेजनजस्ता ठूला इन्टरनेट कम्पनीहरु माथि कर लगाउने कानून पारित गरेको छ । करको दर न्यून रहेका युरोपेली मुलुकहरुमा कार्यालय खडा गरी अन्य मुलुकहरुमा कर छली..
Results 402: You are at page2of 14